'...त्यसपछि ट्याक्सी चालक बन्ने रहर छ' - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, बैशाख १०, २०७३
‘…त्यसपछि ट्याक्सी चालक बन्ने रहर छ’
नयनराज पाण्डे, लेखक
विमोचन हुनै लागेको तपाईंको ‘सल्लीपिर’ उपन्यासको जरा के हो ?
यो विकट हिमाली भेगमा जीवनको जटिलता सामना गरिरहेकाहरूको कथा हो । शेर्पा परिवेश, तिनको सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, संघर्ष र सपनासँगै राज्यको उदासीनतालाई ‘सल्लीपिर’ मा समेट्ने प्रयास गरेको छु ।
भनौं, ‘सल्लीपिर’ ले २०७३ को शुरुआत गर्दैछ । नेपाली साहित्यको लागि नयाँ वर्ष कस्तो रहला ?
साहित्यका सबै विधाको समृद्धिमा यो वर्ष झनै अर्थपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु । आख्यानमा नयाँ विषय, परिवेश र चरित्र भित्रिने सम्भावना जति छ, कवितामा परिपक्व विचारहरूको हस्तक्षेप पनि जारी रहनेछ । निबन्ध लगायतका गैरआख्यानात्मक विधाप्रति पाठकको अभिरुचि बढ्नेछ ।
केही समीक्षक र साहित्यकारहरू समेत अचेलका नेपाली साहित्यिक कृतिहरूलाई ‘बोल्नेको पीठो’ भनिरहेका छन् । तपाईंको विचारमा कुन पीठो, कुन चामल ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिलेका पाठकलाई भ्रममा पार्दै कमजोरलाई असल हो भनी स्थापित गर्न सकिन्न । पाठकको चेतना विकासले लेखकलाई जिम्मेवार बन्न जागरुक बनाउँछ । तर, राम्रो, नराम्रो, असल, खराबबारे बहस भइरहनुपर्छ । यो पहिले पनि हुन्थ्यो, भोलि पनि भइरहने छ । बहस जति स्वस्थ भयो, साहित्य विकासको गति उति तीव्र हुन्छ ।
किशोर नेपालले ‘पठन फेसन’ बारे तपाईंका भनाइ भन्दै लेख लेख्नुभयो । तपाईंले ‘असफल लेखकहरूको रुवाबासी’ भनी प्रतिवाद पनि गर्नुभयो । भनेपछि, तपाईं नेपालको सफल लेखक हो ?
फेसनलाई पनि संस्कृतिकै अंग मानेर विश्लेषण गर्न पनि सकिएला । तर अहिले पाठकमा जुन जागरुकता छ, त्यो फेसनजस्तो मौसमी र क्षणभरमै अप्रासंगिक हुने प्रकृतिको होइन । शिक्षा, इन्टरनेटका कारण सामाजिक संजालको सहजता र सञ्चारमाध्यमले साहित्यलाई दिइरहेको ‘स्पेस’ आदिका कारणले जागरुक पाठक बढेका छन् भन्ने मेरो मान्यता हो ।
म त साहित्यका गम्भीर पाठकसित निरन्तर सम्वाद गर्ने लेखनीमा विश्वास गर्छु । निरुद्देश्य मनोगत कुरा लेख्दिनँ । बलियो विषय, दमदार चरित्र र कलात्मक प्रस्तुतिमा विश्वास गर्छु । मेरो लेखनले केही न केही मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहन्छु । म आफैंलाई सफल या असफलको पगरी लगाइदिन चाहन्न । पाठकले जे भन्छन्, त्यही हो म ।
लेखकबीच यस्तो मालिन्य किन हुन्छ ?
म नकारात्मक सोचको विपक्षमा छु । साहित्यको नयाँ पुस्ताप्रति मलाई विश्वास छ । पाठकको चेतनाप्रति विश्वास छ । त्यसैले म अबको साहित्य झनै समृद्ध हुनेछ भन्नेमा विश्वास राख्छु । आफ्नो असफलता वा कुण्ठाको आधारमा समय र समाजको पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या गर्नेसित मेरो सधैं विमति रहनेछ । यो विमति कुनै व्यक्तिविशेषसँग होइन, प्रवृत्तिसँग हो ।
साहित्यमा प्रगतिशील या प्रजातन्त्रवादी हुनुले के फरक पार्छ ? त्यसो त तपाईं दुवै तर्फकासँग उत्तिकै संसर्गमा देखिनुहुन्छ ?
समाज परिवर्तनका मुद्दा उठाउने ठेक्का प्रगतिशील ठप्पा लागेकाहरूले मात्र लिनुपर्छ र बाँकीले यौन, मनोविज्ञान, कुण्ठा आदिबारे घोत्लिनुपर्छ भन्नु कमजोर, अतिवादी सोच हो । म साहित्यमा चरम कल्पनाशीलता रुचाउँछु, तर त्यसले धरातल छोडेको हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । साहित्यिक समाजको कुन कित्तामा छु भन्नेसँग मेरो सरोकार छैन । तर, के लेख्नुपर्छ भन्ने हेक्का भने सधैं छ । त्यसैले पनि म दुवै कित्ताका असल लेखकहरूसँग सधैं सम्पर्कमा रहन्छु ।
तपाईंका कृतिहरू समथरकै उपज भएका छन् । अहिलेसम्म भिरालोतिरको पात्र–परिवेश किन आएनन् ?
म कुनै विषय, परिवेशमा लेख्नै पर्छ भनी कनीकुथी लेख्दिनँ । कथामा मैले काठमाडौंको नेवारी समाजको कथा पनि लेखेको छु, तिब्बती शरणार्थीको कथा पनि लेखेको छु । यो विषयमा लेख्नुपर्छ र लेख्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएपछि मात्र लेख्छु । त्यसैले यसपटक ‘सल्लीपिर’ मा मैले पृथक् हिमाली परिवेश लेखेको छु । ‘सल्लीपिर’ लेखनीमार्फत मैले फरक विषयमा काम गर्नुको भरपूर आनन्द उठाएँ ।
पछिल्लो एकदशक तपाईं ‘दुई वर्ष, एक कृति’ नीतिमा देखिनुहुन्छ र मसालेदार–कमाउ पटकथातिर लहसिएको आरोप पनि छ । त्यसले गर्दा साहित्यमा पनि सतहीपन आउन थाल्यो भनियो भने तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
मैले पटकथा नलेखेको त आठ दश वर्ष नै भैसक्यो नि । ‘सल्लीपिर’ लगभग अढाइ वर्षपछि आउँदैछ । यति ‘ग्याप’ पर्याप्त हो जस्तो लाग्छ । मैले आफूभित्र लेखनको हुटहुटी रहुन्जेल लेख्ने हो ।
पछिल्लो एक दशकमा मेरा तीन नयाँ उपन्यास आएका हुन् । अरू त पुराना कथाहरूको संकलन मात्र हुन् । विषयको पुनरावृत्ति हुन थाल्यो भन्ने जब आभास हुनेछ, म त्यही दिनबाट लेख्न छाड्नेछु । त्यसपछि मलाई ट्याक्सी चालक बन्ने रहर छ ।
नयनराज पाण्डेले दुईदशक अघिको ‘उलार’ जस्तो परैबाट देखिने माइलस्टोन खडा गर्न सकेनन् भन्दा गलत हुन्छ ?
म आफैंले के भनुँ; यो त पाठकले भन्ने कुरा हो । गुमनाम ‘उलार’ लाई समीक्षकहरूले ‘एप्रिसिएट’ गर्न एक दशक लगाइदिनुभयो । त्यसैले असफलताको स्वाद मैले भोगिसकेको छु । कतिले ‘उलार’ भन्दा ‘लू’ राम्रो भन्नु भएको छ । ‘घामकिरी’ मन पराउने पनि ठूलो तप्का छ । तर, मलाई भने सर्वश्रेष्ठ लेख्नै बाँकी छ भन्ने लागिरहन्छ ।
मेरो लेखनमा विषयको विविधता होस् भन्ने चाहन्छु । एउटै विषयमा ‘लौ मैले गजब लेखें’ भनेर आत्ममुग्ध भएर बसिरहन चाहन्नँ ।
तस्वीरहरूः विक्रम राई